Kheyraadka Online | Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Naadiga Dugsiga Kadib
Xarunta Qiimaynta Acorn
Kooxda Waxbarashada Dugsiga Hore
Kooxda Ka Qayb Galida Dugsiga Hore
Codsiyada iyo macluumaadka
Cuntada Dugsiyada Bilaashka ah iyo Sarkaalka Ardayga
Kooxda Taageerada Qoyska
Daaweynta iyo Kalkaalisada
Tababarka Waalidka / Daryeelaha
PSA & Lacag ururinta
Siyaasadda Ilaalinta Carruurta
Siyaasadda Sinnaanta Fursadaha
Siyaasadda Habboon ee Ardayga
FADLAN Warbixinta Warbixinta
Qorshaha Tallaabada Isboortiga Ilaalinta Ciyaarta
Hawlaha & Adeegyada
Alaabta iyo qalabka
Khayraadka ICT ee bilaashka ah ee LGfL
Boosaska ku yaal Dugsiga Oakleigh
Hoos waxaa ku qoran liiska khayraadka internetka ee aan u malaynayno inuu yahay mid xiiso leh ama faa'iido leh. In kasta oo aan sameyno dadaal si aan u hubino in isku xirnaantaas ay yihiin kuwo sax ah, ilaa iyo taariikhda, Iskuulada Oakleigh ma qaadi karaan mas'uuliyadda bogagga ay hayaan bixiyeyaasha dibadda.
Haddii aad hayso wax soo jeedin ah oo ku saabsan boggaga internetka ee aad ka heshay faa'iido fadlan noo sheeg.
Helitaanka YouTube waa ujeeddo la heli karo oo loogu talagalay dadka isticmaala teknoolojiyada caawiya si ay u cayaarto si toos ah videos. Waxaa si weyn loogu taliyaa Ian Bean.
Booqo Helitaanka YouTube
Raadinta cayaaraha bilaashka ah, cayaaraha madadaalada iyo waxqabadyada caruurta, caruurta yar yar iyo caruurta yar yar? CBeebies waa guriga xiisaha iyo cayaaraha waxbarasho ee loogu talagalay caruurta inay ciyaaraan isla markaana bartaan waqti isku mid ah
Hagaha Qalabka Waxbarashada 2017. In ka badan qalabka 2,000 ee barashada iyo ka shaqeynta waxbarashada iyo goobta shaqada. Mareegta waxaa sameeyay Jane Hart oo ah adeega lacag la'aanta ah ee isticmaalka tiknoolajiyada cusub ee barashada iyo waxqabadka. Waxay hadda noqotay mid ka mid ah goobaha waxbarasho ee ugu booqashada badan dunida ee Webka.
XUSUUSNOW waa khayraad lacag la'aan ah oo lagu abuurayo taageerooyin muuqaal ah. Xulo cabbirka shabakada, ku dar sawirro kuwaas oo ka mid ah calaamadaha kuraasta, ama sawirradaada. Daabacaan oo jar. Khayraad heer sare ah oo loogu talagalay waalidiinta raba inay isticmaalaan taageerooyin muuqaal ah guriga dhexdiisa.
The Qolka Witeboard wuxuu leeyahay kheyraad wax-ku-ool ah oo loogu talagalay ardayda leh dhibaatooyin waxbarasho oo daran iyo qotoda dheer. Inkastoo bartilmaameedyada akhristayaasha interactors badankooda waxay si siman uga faa'iideysan karaan miiska.
Qeybtan cusub ee lagu soo bandhigay bogga intarnetka ee EQUALS laga bilaabo Sebtembar 2017 waxaa ku jira kheyraad waxbarasho oo bilaash ah.
Booqo Isbarbardhiga - Qolka Beyraadda
HelpKidzLearn waa aruurinta software-yada carruurta yaryar iyo kuwa leh dhibaatooyinka barashada si ay u ciyaaraan internetka. Barnaamijka waxaa loo kala qaybiyaa shan qaybood: Sanadaha Hore, Ciyaaraha iyo Dareenada, Sheekooyinka iyo Sheeyada, Cayaaraha Isboortiga & Ogow.
Richard Hirstwood of Tababarka Hirstwood wuxuu abuuray iPad fikrado fikrado ah. Waxaa ka mid ah modules tababarka iPad oo aad adigu gujisid oo aad ka shaqeyn kartid adigoo isticmaalaya fiidiyowyada iyo qoraalka. Waxaa jira agagaaraha 7 saacadaha tababarka oo dhanna waa bilaash hadda sidaas darteed waxaa haboon inaad iska hubiso inta ay weli jirto.
Booqo Hirstwood Training
Bogga internetka Ian Bean, macalimiin hore iyo isku-duwaha ICT-da ee Priory Woods School, Maareeyaha Tiknooloojiyada iyo Tababarka Hoggaanka Tacliinta ee hadda jira Baahiyaha Gaarka ah ee Madaxa Baahiyaha TALT iyo Tababaraha oo ku takhasusay isticmaalka ICT iyo teknolojiga caawiya si ay u taageeraan bartayaasha da 'kasta oo leh baahiyo dheeraad ah oo adag.
Booqo Ian Bean Online
London oo dhan Websaydhku waa kheyraad loogu talagalay helitaanka goobo iyo waxqabadyo laga heli karo caasimadda. Tani waxaa ka mid ah goobaha jardiinooyinka iyo goobaha xilliga firaaqada, makhaayadaha, musqulaha, iyo xataa bangiyada iyo xafiisyada boostada. Waxaad ka iibsan kartaa iPad / Smartphone App ka iTunes.
Booqo London oo dhan
KneeBouncers waxaa laga abuuray 2002 by Punch Robinson, iyo asxaabtiisa Kurt Dommermuth, ee carruurtooda. Waqtigaas, dhamaan cayaaraha caruurta yaryar ee internetka waxay u baahdeen ciyaaryahanka inuu isticmaalo jiirka si uu u xakameeyo ficilka. Sidaa daraadeed waxay ku qeexeen hal gool: in la sameeyo cayaaro taxane ah oo xitaa xubnaha qoyska ugu yar yar ay si fudud u ciyaari karaan. Waxaad ka heli doontaa ciyaaraha waxbarashada, nashaadyada madadaalada si aad u kiciso ilmahaaga, socod baradka ama ilmaha dugsiga horudhaca oo aad bilowdo hanaanka waxbarasho.
Booqo Baabuurta Jilicsan
MERU (Qaybta Ilaalinta Qalabka Caafimaadka) waxay bixisaa adeegga naqshadeynta iyo adeegga wax soo saarka naafonimada ee loogu talagalay dhalinyarada curyaamiinta ah markaan jirin wax kale oo jira si loo daboolo baahidooda. Waxay wax ka bedeli karaan alaabta naafada ah ee hadda jira iyo dayactirka qalabka burburay, iyo sidoo kale naqshadeynta naqshadeynta iyo soo saarida alaab cusub oo adag.
The NSPCC ayaa la xidhiidhay O2 si aad u caawiso ilmahaaga ilaalinta marka ay isticmaalayaan internetka, shabakadaha bulshada, barnaamijyada, ciyaaraha iyo wixii ka baxsan. Haddii aad rabto inaad hagaajiso xakameynta waalidnimada, hagaajinta asturnaanta asturnaanta ama talooyin ku saabsan shabakadaha bulshada, khabiirada ka helaya khadadka lacag la'aanta ah ee O2 & NSPCC waa inay ku caawiyaan. Wac iyaga 0808 800 5002.
Booqo NSPCC iyo O2 - Ilaalinta caruurta internetka oo ammaan ah
The diiwaanka sen / ict ayaa loo sameeyay si loo helo macluumaad iyo agabyo ku hareereysan baahiyo gaar ah. Macalimiinta iyo waalidiintu waxay ku qori karaan bogag internet ah iyo ilaha internetka. Shirkaddadu waxay soo gudbin karaan naftooda iyo alaabtooda sida software, qalab iyo qalab, oo ay weheliso shaqooyin iyo dhacdooyin oo laga yaabo inaad xiiseyneyso.
Booqo SEN ICT Directory
Dunida Gaarka ah by Inclusive Teknoloji waa Adeeg Bilaashka BILAASH ah si loogu hayo kuwa ku lugta leh Waxbarashada Gaarka ah aduunka oo dhan la xiriirto wararkii ugu dambeeyay, horumarka, dhacdooyinka iyo macluumaadka.
Booqo aduunka gaarka ah
At Tate Kids ciyaaro cayaaro fanka bilaash ah iyo madadaalo xiiso leh, raadi waxqabadyo farshaxan, akhris ku saabsan fannaaniinta iyo la wadaag fankaaga. Shabakada farshaxanka ugu fiican kids.
Booqo Tate Kids
Fikradaha Macluumaadka waxay leedahay kumanaan sheekooyin cashar oo bilaash ah, dhaqdhaqaaqyo iyo ilo aad ku isticmaali karto fasalkaaga ama xitaa guriga.
Booqo Fikradaha Macalimiinta
Xilliga Xagaaga 2019 Kooxda Walaalo
on 30.09.2019 by Jessica Ellinor (Riwaayadda iyo Dhaqdhaqaaqa Dhaqtarka)
Qadada Caalamiga ah ee Oakleigh
Hawlaha Maalinta Isboortiga
2019 Dugsiga Oakleigh & Xarunta Sanadaha Hore